काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादन भएका फूलको उचित मूल्य नपाएपछि किसानहरु चिन्तित भएका छन् ।
आफूले उत्पादन गरेको फूल बिक्रीका लागि काठमाडौँसम्म आइपुग्दा पनि लगानी अनुसारको मूल्य नपाएपछि काभ्रेपलाञ्चोक चौँरीदेउराली गाउँपालिकाका शिवशङ्कर चौलागाईं निरास भएका छन् ।
“मेहनत गरेर यहाँसम्म फूल बिक्री गर्न ल्यायो, तर फूलले बजार नै पाउँदैन”, उनले भने । भारतीय फूलका मालाले बजार पाइरहेका बेला नेपाली मालाले भने बजार नपाउनु आफैँमा अशोभनीय रहेको चौलागाईंको भनाइ छ ।
उनले भने, “भारतीय फूल पसलमा सजाएर राखिन्छन्, तर नेपाली फूल सडक पेटीमा सजाएर राखिँदा पनि बिक्री हुन गाह्रो हुन्छ ।” भारतबाट फूल आयात नरोकिएसम्म नेपाली फूलको मालाले बजार नपाउने उनको भनाइ छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने फूलको बजारमा खासै माग नभएको अनुभव काभ्रेकी समिता घिमिरेको छ । उनले भने, “काठमाडौँसम्म फूल बिक्री गर्न आयो, गाडीभाडासमेत उठ्दैन ।” धिमिरेका अनुसार फूल उत्पादक किसानलाई माथि उकास्न सरकार गम्भीर भएर लाग्न सक्नुपर्दछ ।
हिमपातले ढाक्यो गुँरासको फूल !
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानको जंगलमा हिउँले ढाकिएको गुराँसको बोट । तस्बिरः कमल खत्री, बेनी (म्याग्दी), रासस
रोल्पा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयमा स्थापना गरिएको छात्रवृत्ति अक्षयकोषका लागि रु पाँच लाख सहयोग गरेका छन् । रोल्पा सदरमुकाम लिबाङमा रहेको बालकल्याण नमूना माध्यमिक
काठमाडौँ । सांसद रामबहादुर विष्ट : विषादीरहित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी नेपाली जनताले कहिलेसम्म खान पाउँछन् ? कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल : विगतको तुलनामा अहिले ९९ प्रतिशत विषादीरहित खाद्यान्न, फलफूल,
फूलचोकीमा हिउँ खेल्न जानेलाई हिलोको सास्ती ! (फोटोफिचर)
काठमाडौं । उपत्यकाको ललितपुरमा पर्ने प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल फूलचोकीमा केही दिनयता हिउँ पर्नथालेपछि हिउँ खेल्न जानेहरुको भीड लागिरहेको छ । समुद्री सतहदेखि २७६२ मिटरको उचाइमा रहेको यस स्थानबाट काठमाडौंदेखि हिमाल